Ogaden News Agency (ONA) – Siminaar Saxaafadeed oo ka dhacay Xafiiska ILays Studio London UK
Siminaar Saxaafadeed oo ka dhacay Xafiiska ILays Studio London UK
Axad 23/06/2013 London UK
Xafiiska Ilays Studio ayaa maanta waxaa ka dhacay tababar ku aadan siminaar uu soo diyaariyay hoggaanka Warfaafinta JWXO oo loo qabtay xubnaha ilays ee wadanka UK. Munaasabadan Siminaarka waxaa kasoo qeybgalay Hoggaanka Arrimaha Dibada Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadneiya Dr Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi iyo Aggaasimaha Warfaafinta Mudane Maxamed Cali, Aggaasimaha Haayada ururka Mudane Cabdifataax Xirsi iyo Wariye Maxamed Cabdullaahi Iyo Aggaasimaha Haayada Keydka Mudane Cabdinuur.
Munaasabadan waxaa furay Madax xafiiseedka Ilays UK Marwo Shugri Maxamed oo soo dhaweysay masuuliyiinti kasoo qaybgashay iyo Xubnaha Ilays. Marwo shugri waxay ka hadashay muhiimada Siminaarkan iyo ujeedada laga leeyahay inlaga gaadho.
Hogaanka Arrimaha Dibada Dr cabdiraxmaan Sheekh Mahdi ayaa soo jeediyay Siminaarki u horeeyay isaga oo ka hadlay baahida ay u qabaan shacabka Somalida Ogadeniya Media caalami ah oo lagusoo bandhigo Qadiyada Shacabkaas sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay sidii Mediaha shacabka Ogadeniya lagu gaadhsiin lahaa bulshada kale ee ku nool geeska Afrika islamarkaasna lagula tartami lahaa warbaahinta caalamka.
Cabdiraxmaan Xirsi oo ah Aggaasimaha Haayada Ururuka ayaa isna soo jeediyay siminaar kale oo ku aadan hanaansocodka warbaahinta iyo sharciya da ku xeegaaran ee larabo in hadiyo jeer la ilaliyo.
Wariye Maxamed Cabdullaahi oo ah wariye muddo dheer kasoo shaqeeynayay saxaafada ayaa isna halkaas kasoo jeediyay khibaradii uu kasoo helay mudadii u shaqeynayay warbaahinta islamarkaasna halkaas kusoo bandhigay arrimo badan oo ku aadan howlfuinta shaqo maalmeedka saxaafada.
Mudane Maxamed Cali Aggaasimaha Warfaafinta oo safar dheer ugasoobaxay wadanka Denmark si uu uga qeyb galo Siminaarkan islamarkaasna howlo shaqo u joogay wadanka UK oo la xidhiidha sidii loo horumarin lahaa saxaafada halganka shacabka Somalida Ogadeniya ayaa soo bandhigay Barnaamijyo hoggaanka warfaafintu ugu talo galay inay ku howlgalaan. Barnaamijyadaas ayaa markii uu Aggaasimuhu soo bandhigay laga faaloday qaababka ugu haboon ee loo hirgalinkaro.